Ndị nrụpụta On-Grid Inverters - China On-Grid Inverters Factory & Suppliers
Usoro nke R3
Ndị ntụgharị On-Grid
Emebere RENAC Pro usoro inverter maka ọrụ obibi na obere azụmahịa.Site na nhazi kọmpat ya, inverter dị ọkụ ma dị mfe ịwụnye.Oke arụmọrụ bụ 98.5%.Site na usoro ikuku ventilashị dị elu emebere, onye inverter nwere ike ịgbasa ọkụ nke ọma.
RENAC R1 Macro Series bụ ihe ntụgharị ọkụ na-agba ọsọ nke nwere oke kọmpat, sọftụwia zuru oke na teknụzụ ngwaike.Usoro R1 Macro na-enye arụmọrụ dị elu yana onye na-eduzi klaasị na-arụ ọrụ fan-enweghị obere mkpọtụ mkpọtụ.
Renac R3 Max Series 120-150 kW atọ usoro usoro eriri inverter nakweere 10/12 MPPT imewe iji nye atụmatụ nhazi mgbanwe karịa.Ihe ntinye kachasị ugbu a nke eriri ọ bụla ruru 13A, nke nwere ike ịmegharị nke ọma na modul ike dị elu iji mụbaa ike ike.
Enwere ike ịme nhazi ngwa ngwa site na Bluetooth.Ọrụ Smart IV Curve, Ọrụ SVG abalị, na-eme ka O&M dị mfe.
RENAC R3 Plus Series inverter dị mma maka nnukwu ọrụ azụmaahịa buru ibu, ọkachasị maka nnukwu ụlọ azụmahịa na osisi ugbo.Oke a na-emetụta topology dị elu yana teknụzụ njikwa ọhụrụ iji nweta oke arụmọrụ nke 99.0% yana nloghachi ogologo oge yana uru maka ndị nwe oru ngo.
Emebere R3 Pre series inverter karịsịa maka ọrụ obibi nke atọ na obere azụmahịa.Site na nhazi kọmpat ya, R3 Pre series inverter bụ 40% dị ọkụ karịa ọgbọ gara aga.Ntugharị kachasị mma nwere ike iru 98.5%.Ihe ntinye kachasị ugbu a nke eriri ọ bụla ruru 13A, nke nwere ike ịmegharị nke ọma na modul ike dị elu iji mụbaa ike ike.
Emebere RENAC R3 LV Series inverter ugboro atọ na ntinye ike voltaji dị obere ngwa PV azụmahịa.Emepụtara dị ka nhọrọ kacha mma maka ahịa ahịa South America na ndị inverters dị ala karịa 10kW, ọ dabara na ụdị voltaji dị iche iche na mpaghara, nke na-ekpuchi 208V, 220V na 240V.Site na inverter usoro R3 LV, enwere ike ime ka nhazi sistemu dị mfe kama itinye ihe ngbanwe dị oke ọnụ nke na-emetụta arụmọrụ ngbanwe nke sistemu ahụ.
RENAC R3 Note Series inverter bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma dị na mpaghara obibi na azụmaahịa site na ike teknụzụ ya, nke na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ntụgharị na-arụpụta ihe na ahịa.Site na arụmọrụ dị elu nke (98.3%), nkwalite ike na oke ibu, R3 Note Series na-anọchi anya nkwalite pụtara ìhè na ụlọ ọrụ inverter.
Renac R1 Moto usoro inverters zuru oke na-egbo mkpa ahịa maka ụdị obibi obibi dị elu nke otu usoro, ma dabara maka ụlọ ime obodo na ụlọ ime obodo nwere nnukwu ụlọ.Ha nwere ike dochie anya ịwụnye abụọ ma ọ bụ karịa ike inverters otu oge.Ka ị na-ahụ na ego enwetara nke nrụpụta ike, enwere ike ibelata ọnụ ahịa sistemu nke ukwuu.
RENAC R1 Mini Series inverters bụ ezigbo nhọrọ maka ọrụ obibi nwere njupụta ike dị elu, oke ntinye voltaji maka nrụnye na-agbanwe agbanwe yana egwuregwu zuru oke maka ogwe PV ike dị elu.
Inverter Gbanyụọ Grid 5kw, Ngwakọ Na Grid Inverter, Gbanyụọ Grid Micro Inverter, Ngwakọ Na Grid Inverter nwere Nchekwa Ike, Ikuku Turbine Grid Tie Inverter, Ngwakọ Grid Tie Inverter,